トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Pachinko efitrano fandraisam-bahinin'ny ny faritra endri-javatra (ny maha samy hafa ny raharaha politika amin'ny tan?n-dehibe sy ambanivohitra)
Koa satria dia pachinko efi-trano ihany koa ny orinasa ara-barotra, tsy marina ny fivarotana vao nahazo mpanjifa. Noho izany, orinasa hafa ihany koa, isika dia miasa amin'ny tsirairay mpivarotra varotra politika. Misy ihany koa ny vola ampahany miankina tahan'ny sy ny tahaka, fa ny toetra mampiavaka ny faritra azo jerena eo amin'ny raharaham-barotra tena politika.
Ahoana raha ny maha samy hafa, ndeha ampitahaina amin'ny ny maha samy hafa ny raharaha an-drenivohitra sy ny toeram-pivarotana eo an-toerana fivarotana.
ao amin'ny tan?n-dehibe sy ambanivohitra mpanjifa, momba hafa hisafidy ny pachinko trano izy. Urban mpanjifa, fa ho avy ny pachinko efi-trano mba mikendry ny handresy isika, dia ho avy ny niandry ny antony milalao noho handresy mpanjifa an-toerana. Big fahasamihafana hivoaka avy any ny sasany. Miasa dia ahitana ny asa, fa misy rivo-piainana isan-karazany manao asa fanompoana toy ny mpanjifa sy ny fitehirizana, misy manokana matetika ny ho lasa matetika sy ny Ball be tahaka ny maha samy hafa ny fanoloana Xintai. Ao amin'ny
pachinko parlors, mba hampitombo ny fandidiana soa azo hoe tena ilaina ny asa fandidiana. Urban fivarotana fanoloana matetika Xintai dia nanao. Na dia ao amin'ny gazety matihanina toy ny ankehitriny, rehefa mifanaraka fotsiny Xintai vaovao hita, tan?n-dehibe ianao mpanjifa te namely ny farany latabatra. Fifaninanana tsena manodidina
dia, indray mandeha farany nampiditra ny sehatra amin'ny dingana voalohany, mba hisarihana mpanjifa ny toeram-pivarotana dia mazava ho azy latsaka. Mpanjifa dia tsy tonga tsy hanao raharaham-barotra. Mba tsy ho toy izany ny toe-javatra, ny tany am-boalohany ny farany adopter sehatra hifaninana, dia midika izany fa nitarika mba hisarihana mpanjifa.
Na dia izany aza, mba hampahafantatra ny vaovao milina goavana hisy olona vidiny. Mazava ho azy, ny vidiny dia tsy maintsy ihany koa dia hatsangana indray tombony. Izany no tanjona, tao an-tan?nan'i ny fivarotana tsy mety maty ny baolina isaky ny hetsika, dia nanisy baolina tao amin'ny r?solution ihany no tsy fahampian'ny fotoana ny zava-nitranga lehibe.
tan?na pachinko efi-trano dia ny hisarihana mpanjifa, ny fandefasana be dia be ny zava-nitranga, dia misy ihany koa ny fivarotana ny hanao ny fitalahoana amin'ny fivarotana. Foana dia sarotra ny maneho iray payout, lafin-javatra tao an-tan?na ny efitrano fandraisam-bahinin'ny pachinko ny raharaha politika fa na dia lehibe kokoa ny hampakatra fitsarana ny Xintai, maro no tonga amin'ny fisehoan-javatra andrasana mba hisarihana mpanjifa, toy ny any zavatra mba hahaliana. Any amin'ny fivarotana an-toerana ho ny mifanohitra amin'izany, Xintai fanoloana dia fotoana vitsivitsy isam-bolana. Milaza tsy fahita firy fanoloana sy
, fa misy ihany koa azo atao ny hampiditra ny sehatra farany, ny ankamaroan'ny no ho fampidirana ny latabatra ampiasaina. Nampiasa mijoro raha oharina amin'ny farany mijoro, I vidin'izany dia ahena. Noho izany antony izany, tsy ny zava-nitranga, dia ho azo atao ny hanome ny tranon'omby payout avy amin'ny ara-dal?na.
avy amin'ny mpanjifa ihany koa ny fototra, ny hotehirizina ao amin'ny antso izay milalao amin'ny fanofana ambany baolina betsaka, raha mifantoka amin'ny mpanjifa ao ambany-miverina milalao foana koa ny hampiaiky volana azy ao ambany-doza asa. Mazava ho azy, ny magazay koa fa tsy mahasoa ny andro iray ihany any Toy izany koa, dia ho mafy orina toy ny fandidiana sy ny profitability azo antoka.
mba mamokatra ny tombony, raha oharina amin'ny tan?n-dehibe toeram-pivarotana ao amin'ny hetsika, izay hatao ny zava-nitranga ny Gase izay hamadika ny mpanjifa dia ho kely.
in pachinko parlors, ka hisy ny fomba isan-karazany ny varotra, fa tsy izy rehetra ny pachinko efi-trano marina, toy izany amin'ny maha samy hafa ny toerana toe-javatra sy ny mpanjifa ny sosona, ny tan?nan 'pachinko parlors sy eo an-toerana pachinko trano izy ary ao dia ny hoe misy fototra raharaha politika tsy mitovy.
ao an-tsaina fa efa nilaza izany, dia mety ho sady efa nahita fandraharahana fomba Pachinkoya, payout, zava-nitranga, sns, jereo fa ny fivarotana tsy nihevitra na inona na inona aho hatramin'izao dia mahagaga tsara dia tsara toeram-pivarotana izany no. x000D_ marin-toerana ho an'ny mahasoa, na dia ao amin'ny hetsika raha oharina amin'ny tan?na nisy ny toeram-pivarotana, izay hatao ny zava-nitranga ny Gase izay hamadika ny mpanjifa dia ho kely.
ao an-tsaina fa efa nilaza izany, dia mety ho sady efa nahita fandraharahana fomba Pachinkoya, payout, zava-nitranga, sns, jereo fa ny fivarotana tsy nihevitra na inona na inona aho hatramin'izao dia mahagaga tsara dia tsara toeram-pivarotana izany no.